Iray Setp BT Sensor - BALLYA
Dingana iray Sensor BT
Betalactam + Tetracycline Combo Test Kit
Ampidiro ao anaty santionan'ny ronono fotsiny ilay tsipika, miandry 7 minitra fotsiny mba hahazoana vokatra azo antoka
Ny tondrozotra fandidiana ho an'ny TOA IRAY BT Sensor Download
1. Inona no fitsapana kombo beta lactam tetracycline?
2. Inona ireo laktam beta?
4. Ny fahavoazan'ny beta lactam sy tetracycline
5. Endri-javatra amin'ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
6. Fomba fitiliana ny fitsapana kombo Beta lactam tetracycline
7. santionany amin'ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
8. Fepetra voafaritra ho an'ny fitsapana combo beta lactam tetracycline
9. Ny maha-zava-dehibe ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
10. Ireo mpiorina amin'ny fitsapana kombo Beta lactam tetracycline
11. Fitaovana fitsapana kombo Beta lactam tetracycline
12. Ahoana no fampiasana test combo beta lactam tetracycline?
14. Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana combo beta lactam tetracycline?
Inona ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline?
Kit roa-sensor, haingana hamantatra karazana residu antibiotika roa amin'ny vokatra ronono sy ronono amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia fiarovan'ny chromatography volamena koloidaly. Raha vantany vao 7 minitra ny valiny.
Inona avy ireo lactam beta?
Beta-lactam antibiotika dia karazana antibiotika marobe, ao anatin'izany ny penicillin sy ny vokariny, cephalosporins, monamide ring, carbapenems ary penicillene enzyme inhibitors sns. firafitra.
Amin'ny ankapobeny ny antibiotika rehetra izay misy ny β-lactam core amin'ny firafitry ny molekiola dia an'ny β-lactams Antibiotics, io no kilasin'ny antibiotika efa be mpampiasa indrindra, ao anatin'izany ny penicillins sy cephalosporins izay matetika ampiasain'ny klinika, ary koa ireo cephalosporins vao haingana, thiomycins. , laktatam ocy-lakactam monôlika, sns.
Ny antibiotika toy izany dia manana tombony amin'ny fiasan'ny bakteria mahery, ny poizina ambany, ny fambara ary ny fahombiazan'ny klinika tsara. Ny firafitry ny simika an'ity kilasin'ny fanafody ity, indrindra ny fiovan'ny rojom-baravarana, dia namorona antibiotika maro samy hafa miaraka amin'ny karazana bakteria maro karazana sy ny vokatra azo avy amin'ny bakteria ary ny fananana ara-panafody.
Ny mekanisma fiasan'ny antibiotika beta lactam isan-karazany dia mitovy amin'izany. Azon'izy ireo atao ny manakana ny synthase mucopeptide amin'ny rindrin'ny sela, dia ny proteinina mamatotra penicillin (PBPs), noho izany manakana ny tsy fitambaran'ny mucopeptides amin'ny rindrin'ny sela, ka miteraka tsy fahatomombanan'ny rindrin'ny sela sy bakteria fanitarana ny vatana.
Ho fanampin'izany, ny vokatra mahafaty amin'ny bakteria dia tokony hampidirina ihany koa ny fiasan'ny bakteria, ary ny fanoherana ireo karazana mutant tsy misy autolysin. Ny biby dia tsy manana rindrin'ny sela ary tsy tratry ny fanafody β-lactam. Noho izany, ity kilasin'ny zava-mahadomelina ity dia misy fiatraikany bakteria amin'ny bakteria ary misy poizina ambany amin'ny mpampiantrano.
Tetracyclines dia kilasin'ny antibiotika misy karazany marobe vokarin'ny actinomycetes, ao anatin'izany ny chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline ary ny derivatives semi-synthetic an'ny methenoxytetracycline, Mycin mahery, dimethylaminotetracycline, sns., ny rafitr'izy ireo dia samy manana ny taolan'ny naphthacene.
Ny antibiotika Tetracycline dia miovaova amin'ny toetran'ny asidra sy alkaly. Ny zava-mahadomelina Tetracycline dia misy vondrona hydroxyl maro, vondrona enol hydroxyl ary vondrona carbonyl, ary afaka mamorona chelates tsy mety ritra miaraka amin'ny ion-by metaly maro samihafa ao anatin'ny fepetra tsy miandany. Izy io dia mamorona calcium na magnesium magaly tsy misy fatrany miaraka amin'ny iôna calcium sy magnesium, mamorona kompana mena misy ions vy, ary mamorona kompana mavo misy ions aluminium. Ao amin'ny vatana, ny sarotra namboarin'ireo tetracyclines fanafody sy ions calcium dia napetraka amin'ny taolana sy ny nify amin'ny loko mavo.
Ho mavo ny nify rehefa lasan'ny ankizy. Aorian'ny fandraisan'ny vehivavy bevohoka azy, ny zanany vao teraka dia mety hanana tarehy maloto ary manakana ny fitomboan'ny taolana. Noho izany, ny ankizy sy ny vehivavy bevohoka dia tokony hampiasa an'io fanafody io amin'ny fomba fitandremana na fadio ny fihinanana azy.
Ity vokatra ity dia a anti-bakteria mivelatra agents, izay misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny fifantohana ambony. Ho fanampin'ny bakteria miabo gram-positive mahazatra, bakteria gram-negatif ary bakteria anaerobic, ny ankamaroan'ny Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, Atypical Mycobacterium, ary Spirochetes dia mora tohina amin'ity vokatra ity ihany koa.
Ny vokatr'io vokatra io amin'ny bakteria Gram-positive dia tsara kokoa noho ny bakteria Gram-negatif, fa ny Enterococcus kosa mahatohitra izany. Ny hafa toa an'i Actinomyces, Bacillus antracis, Listeria monocytogenes, Clostridium, Nocardia, sns. Dia marefo amin'ity vokatra ity. Ity vokatra ity dia misy hetsika fanoherana bakteria sasany manohitra ny Neisseria gonorrhoeae, fa ny Neisseria gonorrhoeae mahazaka penicillin koa dia mahatohitra tetracycline.
Ny fahasimban'ny beta lactam sy tetracycline
Ny antibiotika Tetracycline dia misy chlortetracycline, oxytetracycline ary tetracycline, sns. additives fahana hampiroborobo ny fitomboan'ny fiompiana sy ny akoho amam-borona, ary be mpampiasa amin'ny biby fihinana.
Na izany aza, ny fampiasana diso tafahoatra dia tsy azo ihodivirana ka mahatonga ny metabolita sy antibiotika hafa mifandraika amin'ny taolana, atody, ronono ary taova misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny alàlan'ny rojom-pisakafoanana. Ny fanararaotana antibiotika dia miteraka fanoherana, miteraka fahasahiranana amin'ny fitsaboana aretin'olombelona.
Endri-javatra amin'ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
1. valiny famakiana 7min
3. Na ny matihanina na ny fitaovana ilaina
4. Mora miasa
Fomba fikarohana ny fitsapana kombo Beta lactam tetracycline
Ny Beta lactams Tetracyclines Combo Test dia a Fanandramana immunochromatography volamena koloza izay mamantatra ny Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxicillin, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Nafcillin, Cefquinome, Cefacetrile, Cefalonium, Cefazolin, Cefoperazone, Cephapirin, Ceftiofur ary milkcode MRL.
Santionany amin'ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
Famaritana fetra ho an'ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
Ny maha-zava-dehibe ny fitsapana kombo beta lactam tetracycline
Ny fitsapana combo beta beta lactam tetracycline dia afaka manampy ny mpanamboatra, ny masoivoho mpanara-maso ary ny maso ny kalitaon'ny vokatra ary manampy ny olona hiaro ny fahasalamany.
Ireo mpiorina amin'ny fitsapana kombo Beta lactam tetracycline
Fitaovana fitsapana kombo Beta lactam tetracycline
2. Pipette & Pipette Tip
3. Takelaka tsara lovia
Ahoana ny fampiasana test combo beta lactam tetracycline?
2. Avy eo atsofohy mandritra ny 5min.
3. Atsofohy ao anaty lavadrano mikraoba ilay fantsom-panandramana miaraka amina atelaka tanteraka voatsoboka.
Fony antibiotika no nampiasaina voalohany tamin'ny olombelona dia noheverinay ho "zava-mahadomelina" izy ireo. Raha mbola mihombo ny olan'ny fanararaotana antibiotika, dia nitondra fahavoazana lehibe ho an'ny olombelona ihany koa ny fanoheran'izy ireo.
Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana combo beta lactam tetracycline?